Bit By Bit - Ukuqaphela ukuziphatha - 2.3.1.3 Non-esisheshayo
Ukumeda kakhulu ukubuyeka singashintsha ukuziphatha big imithombo data.
Enye inselele yocwaningo social uwukuthi abantu ukuba bashintshe ukuziphatha bazo uma zazi ukuthi basuke kwabonwa abacwaningi. Izazi zokuhlalisana kwabantu ngokuvamile ukubiza lolu shintsho ukuziphatha eziphendula umcwaningi nesilinganiso reactivity (Webb et al. 1966) . Esinye isici idatha big ukuthi abaningi umcwaningi uthole ngimthembise wukuthi abahlanganyeli ngokuvamile abazi ukuthi banayo ukuthi idatha yabo basuke othwetshulwayo noma they sesinomkhuba ngakho kuleli qoqo idatha ukuthi ayisekho lishintsha ukuziphatha kwabo. Ngenxa yokuthi bayasilalela non-esisheshayo, Ngakho-ke, imithombo eminingi idatha big ingasetshenziswa ukutadisha ukuziphatha akubanga amendable ukulinganisa olunembile ngaphambili. Ngokwesibonelo, Stephens-Davidowitz (2014) asetshenziswa nokudlanga imigomo zobandlululo ngo imibuzo search engine ukukala animus ngokobuhlanga ezifundazweni ezahlukene United States. I non-esisheshayo big (bheka isigaba odlule) ubunjalo idatha search inikwe amandla izilinganiso ukuthi bekuyoba nzima ngokusebenzisa ezinye izindlela, ezifana survey.
Non-reactivity Nokho, akusho ukuthi lezi idatha thile ngqo ukubonakalisa of ukuziphatha kwabantu noma izimo zengqondo. Ngokwesibonelo, njengoba omunye ummangalelwa etshela Newman et al. (2011) , "Akukona ukuthi anginayo izinkinga, Ngithathe nje ukubenza on Facebook." Ngamanye amazwi, nakuba eminye imithombo idatha big non-esisheshayo, awayona free of ukufisela noma ukuchema kuzo social njalo , ukuthambekela kubantu ukuba ufune ukwethula ngokwabo ngendlela engcono kakhulu. Ngaphezu kwalokho, njengoba ngizobuya ukuchaza kabanzi ngezansi, le mithombo idatha ngezinye izikhathi uthintwe imigomo abanikazi yesikhulumi, inkinga esibizwa nolokukhungathekisa algorithmic (ezichazwe ngezansi).
Nakuba non-reactivity kunenzuzo ucwaningo, ethungatha ukuziphatha kwabantu ngaphandle kwemvume yabo kanye nokuqwashisa uvusa Ukukhathazeka Ngezimiso Zokuhle Nokubi Kuchazwa kabanzi lapha ngezansi kanye ngokuningiliziwe eSahlukweni 6. nezinye izinkinga zomphakathi ngokumelene anda ukubhekwa digital lungaholela big idatha izinhlelo babe esisheshayo more ngokuhamba kwesikhathi, futhi eqinile ukukhathazeka mayelana ukubhekwa digital Kungaholela nasekutheni abanye abantu ukuzama ukuphuma big idatha izinhlelo ngokuphelele, okwandisa ukukhathazeka mayelana non-wokumelwa (echazwe ngezansi).
Lezi izindawo ezintathu ezinhle idatha big for social ucwaningo-big, njalo-on, futhi non-esisheshayo-ngokuvamile ziphakame ngoba le mithombo idatha azidalwanga abacwaningi ucwaningo. Manje, mina ngizobe phenya izindawo eziyisikhombisa idatha imithombo big ezimbi ucwaningo. Lezi zici futhi bathambekele ziphakame ngoba le datha akadalwanga abacwaningi ucwaningo.